Nhaka yaJudha (1-12)
Mwanasikana waKarebhi anowana munda (13-19)
Maguta aJudha (20-63)
15 Nyika yakapiwa+ dzinza raJudha* kuti ive yemhuri dzavo yaisvika kumuganhu weEdhomu,+ renje reZini, uye kunoperera Negebhu, kumaodzanyemba kwayo. 2 Muganhu wavo wekumaodzanyemba waitangira panogumira Gungwa reMunyu,*+ kumhenderekedzo yaro yekumaodzanyemba. 3 Waibva waenda kumaodzanyemba kumukwidza weAkrabhimu,+ wopfuurira kusvika kuZini, wobva wakwidza kubva kumaodzanyemba uchienda kuKadheshi-bhaneya,+ wopfuurira uchienda kuHezroni, kusvika kuAdhari, wobva wapota uchienda kuKaka. 4 Waipfuurira kuenda kuAzmoni,+ woenda kuRwizi* rweIjipiti,+ uye muganhu wacho waiperera kuGungwa.* Uyu ndiwo waiva muganhu wavo wekumaodzanyemba. 5 Muganhu wekumabvazuva waiva Gungwa reMunyu* kusvikira panodira Rwizi rwaJodhani mugungwa racho, uye muganhu wekudivi rekuchamhembe waitangira kumhenderekedzo yegungwa racho, panodira Rwizi rwaJodhani+ mugungwa. 6 Muganhu wacho waibva waenda kuBheti-hogra+ wopfuura nekuchamhembe kweBheti-arabha,+ kusvika kudombo raBhohani+ mwanakomana waRubheni. 7 Muganhu wacho waipfuurira kuDhebhiri muBani reAkori,+ wonanga kuchamhembe kuGirigari,+ iri pakatarisana nemukwidza weAdhumimu, iri kumaodzanyemba kwerwizi,* uye waipfuurira kusvika kuchitubu cheEni-shemeshi,+ woperera kuEni-rogeri.+ 8 Muganhu wacho waienda kuBani reMwanakomana waHinomu+ kusvika kumateru evaJebhusi+ kumaodzanyemba, kureva Jerusarema,+ uye waikwira uchienda nepamusoro pegomo rakatarisana neBani raHinomu kumavirira, riri panogumira Bani reRefaimu kuchamhembe. 9 Muganhu wacho waibva pamusoro pegomo racho kusvikira kuchitubu chemvura yeNeftoa+ uchinosvika kumaguta eGomo reEfroni; woenda kuBhaara, kureva Kiriyati-jearimu.+ 10 Muganhu wacho waipoterera uchibva kuBhaara kumavirira uchienda kuGomo reSeiri, woyambuka kumateru eGomo reJeyarimu kuchamhembe, kureva Kesaroni, wodzika kuBheti-shemeshi+ woyambuka kuTimna.+ 11 Muganhu wacho waisvika kumateru eEkroni+ kuchamhembe, wobva waenda kuShikeroni, wopfuurira uchienda kuGomo reBhaara, uye wainosvika kuJabneeri, uchinogumira kugungwa. 12 Muganhu wekumavirira waiva kuGungwa Guru,*+ pamhenderekedzo yaro. Uyu ndiwo waiva muganhu kumativi ese enyika yevanhu vekwaJudha maererano nemhuri dzavo. 13 Uye Joshua akapa Karebhi+ mwanakomana waJefune mugove pakati pevanhu vekwaJudha sezvakanga zvarayirwa naJehovha, akamupa Kiriyati-abha (Abha aiva baba vaAnaki), kureva Hebroni.+ 14 Saka Karebhi akadzinga vanakomana vatatu vaAnaki+ imomo vaiti: Sheshai, Ahimani, naTarimai,+ vanhu vakabva nekunaAnaki. 15 Akabva ipapo akaenda kunorwisa vagari vekuDhebhiri.+ (Dhebhiri yaimbonzi Kiriyati-seferi.) 16 Karebhi akabva ati: “Munhu anorwisa Kiriyati-seferi oitora, ndichamupa mwanasikana wangu Akisa kuti ave mudzimai wake.” 17 Otinieri+ mwanakomana waKenazi+ munin’ina waKarebhi, akabva aitora. Saka akamupa mwanasikana wake Akisa+ kuti ave mudzimai wake. 18 Akisa paakanga achienda kumba kwemurume wake Otinieri, akamukurudzira kuti akumbire nzvimbo kuna baba vake Karebhi. Akisa akabva aburuka padhongi rake.* Karebhi akamubvunza kuti: “Uri kudei?”+ 19 Akati: “Ndinokumbirawo kuti mundipe chikomborero, nekuti mandipa nzvimbo iri kumaodzanyemba;* ndipeiwo neGuroti-maimu.”* Saka akamupa Guroti Yekumusoro neGuroti Yekuzasi. 20 Iyi ndiyo yaiva nhaka yedzinza raJudha maererano nemhuri dzavo. 21 Maguta ekumucheto edzinza raJudha nechekumuganhu weEdhomu+ kumaodzanyemba aiva: Kabhuzeeri, Edheri, Jaguri, 22 Kina, Dhimona, Adhadha, 23 Kedheshi, Hazori, Itinani, 24 Zifi, Teremu, Bheyaroti, 25 Hazori-hadhata, Keriyoti-hezroni, kureva Hazori, 26 Amamu, Shema, Moradha,+ 27 Hazari-gadha, Heshmoni, Bheti-pereti,+ 28 Hazari-shuari, Bheeri-shebha,+ Bhiziyotiya, 29 Bhaara, Ayimu, Ezemu, 30 Eritoradhi, Kesiri, Homa,+ 31 Zikragi,+ Madhimana, Sanisana, 32 Rebhaoti, Shirihimu, Aini, neRimoni,+ maguta acho ese aiva 29, pamwe chete nemisha yawo. 33 MuShefera+ maiva neEshtaori, Zora,+ Ashna, 34 Zanoa, Eni-ganimu, Tapua, Enamu, 35 Jamuti, Adhuramu,+ Soko, Azeka,+ 36 Shaaraimu,+ Adhitaimu, neGedhera neGedherotaimu,* maguta 14 nemisha yawo. 37 Zenani, Hadhasha, Migdhari-gadhi, 38 Dhireyani, Mizpe, Jokteeri, 39 Rakishi,+ Bhozkati, Egroni, 40 Kabhoni, Ramamu, Kitrishi, 41 Gedheroti, Bheti-dhagoni, Naama, neMakedha,+ maguta 16 nemisha yawo. 42 Ribna,+ Eteri, Ashani,+ 43 Ifta, Ashna, Nezibhi, 44 Keira, Akzibhu, neMarisha, maguta 9 nemisha yaiva pedyo nawo. 45 Ekroni nemaguta madiki aiva akaipoteredza uye misha yaiva pedyo nayo; 46 kubva kuEkroni kumavirira, nzvimbo dzese dziri pedyo neAshdhodhi nemisha yaiva pedyo nadzo. 47 Ashdhodhi+ nemaguta madiki aiva akaipoteredza pamwe chete nemisha yaiva pedyo nayo; Gaza+ nemaguta madiki aiva akaipoteredza pamwe chete nemisha yaiva pedyo nayo, kusvika kuRwizi* rweIjipiti, Gungwa Guru,* nenzvimbo yaiva pedyo.+ 48 Uye munharaunda ine makomo, Shamiri, Jatiri,+ Soko, 49 Dhana, Kiriyati-sana, kureva Dhebhiri, 50 Anabhu, Eshtemo,+ Animu, 51 Gosheni,+ Horoni, neGiro,+ maguta 11 nemisha yawo. 52 Arabhu, Dhuma, Eshani, 53 Janimu, Bheti-tapua, Afeka, 54 Humuta, Kiriyati-abha, kureva Hebroni,+ neZiori, maguta 9 nemisha yawo. 55 Maoni,+ Kameri, Zifi,+ Juta, 56 Jezreeri, Jokdheyamu, Zanoa, 57 Keini, Gibhiya, neTimna,+ maguta 10 nemisha yawo. 58 Harihuri, Bheti-zuri, Gedhori, 59 Maarati, Bheti-anoti, neEritekoni, maguta 6 nemisha yawo. 60 Kiriyati-bhaari, kureva Kiriyati-jearimu,+ neRabha, maguta maviri nemisha yawo. 61 Murenje maiva neBheti-arabha,+ Midhini, Sekaka, 62 Nibshani, Guta reMunyu, neEni-gedhi,+ maguta 6 nemisha yawo. 63 Varume vedzinza raJudha havana kukwanisa kudzinga vaJebhusi+ vaigara muJerusarema,+ saka vaJebhusi vachiri kugara nevaJudha muJerusarema nanhasi.
^ Kana kuti “Nyika yakapiwa dzinza raJudha pachishandiswa mujenya.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “akabva aombera maoko ari padhongi rake.”
^ Kureva kuti “Madziva Emvura.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “Gedhera nematanga aro emakwai.”